कृतज्ञ छु - Dubulki.com
Home » Nepali Poem: Kabita » कृतज्ञ छु
कृतज्ञ छु (Grateful For)
February 4, 2017 2:57 pm Category: Nepali Poem: Kabita Leaveacomment A+ / A-
यस सुन्दर संसारमा आमन्त्रण गर्ने
मेरो आमा बुबा !
बुबाको एक बुँद त्यो विर्य
कतै खेर गएको भए
आमाले आफ्नो मृत्यु वरण
सम्म हुन सक्ने
त्यो प्रशव पिडा
हाँसी हाँसी स्वीकार नगरेको भए
के मेरो जन्म संभव हुन्थ्यो ?
पक्कै हुने थिएन !
हजुरहरूको सन्तानको हुन पाएकोमा
म शौभाग्यशाली ठान्छु ।
कुनै त्यस्तो शब्द छैन
जुन हजुरहरूको प्रशंसाको लागी
मलाई धर्तिमा आफ्नो सन्तानको रूपमा
पाइला टेकाउने हजुरहरू
महान हुनु हुन्छ
म सदाको लागी कृतज्ञ छु ।
बाबुराम पन्थी “गुल्मेली”
कृतज्ञ छु Reviewed by Baburam Panthi on Feb 04 . हजुरहरूको चाहनामा मेरो जिवन यस सुन्दर संसारमा आमन्त्रण गर्ने मेरो आमा बुबा ! बुबाको एक बुँद त्यो विर्य कतै खेर गएको भए आमाले आफ्नो मृत्यु वरण सम्म हुन सक्ने त्य हजुरहरूको चाहनामा मेरो जिवन यस सुन्दर संसारमा आमन्त्रण गर्ने मेरो आमा बुबा ! बुबाको एक बुँद त्यो विर्य कतै खेर गएको भए आमाले आफ्नो मृत्यु वरण सम्म हुन सक्ने त्य Rating: 0
भ्रमव्युँझदा अाफै सात समुन्द्र पारी...